एलएसडी-अंतर - यो के हो?
हरेक मोटरहाक्ने व्यक्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ कि आफ्नो कार मा जानकारी धेरै सकेसम्म उपयोगी र महत्वपूर्ण जानकारी। निस्सन्देह, अंतर के छ तपाईंलाई थाहा छैन भने, त्यसपछि तपाईं अझै पनि कार चलाउनु गर्न सक्षम हुनेछ। मा तपाईं थप गर्न सक्षम हुने छैन, र वास्तवमा धेरै मोटर चालकहरुलाई आफ्नै चार wheeled मित्र मर्मत गर्न रुचि - तर सबै भन्दा बढी छ र। यसबाहेक, चालक यसको आफ्नै अलिखित समुदाय छ, र के तपाईं आफ्नो कार सञ्चालन गर्ने बारे एक सुत्र छैन भने शायद यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले राम्रो भविष्यमा तपाईं लागि उपयोगी हुन सक्छ रूपमा बिल्कुल, सबै विवरण सिक्नुपर्छ किन यो छ।
र यस लेखमा विस्तार एलएसडी-अंतर मा छलफल गरिनेछ। यो के हो? यसले कसरी काम गर्छ? छन् आफ्नो विचार के हो? यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ तपाईं एलएसडी-अंतर बारेमा लेख पढ्न प्रक्रिया मा उत्तर पाउनुहुनेछ। यो के हो? यो म जवाफ पाउन चाहनुहुन्छ, तर हतार छैन पहिलो प्रश्न। सबै को पहिलो तपाईं सिद्धान्त मा यस्तो अंतर, यदि तपाईंलाई थाहा छैन थाहा हुँदैन। जानकारी तपाईं पहिले नै थाहा छ भने, तपाईं बस लेखको मुख्य भागमा अघि बढ्नु अघि आफ्नो ज्ञान ताजा गर्न सक्नुहुन्छ।
को अंतर के हो?
तसर्थ, यस सामाग्री को मुख्य विषय - एलएसडी-अंतर: यो के हो, यो काम गर्दछ, र यति मा कसरी। तर पहिलो, तपाईं अझै पनि सामान्य मा एक अंतर छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। धेरै मोटर चालकहरुलाई पहिले नै यो अवधारणा को परिभाषा थाहा छ, तर यो अझै पनि अज्ञात छ तपाईं भने यो जानकारी विषय आफ्नो थप अध्ययनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
मोटर वाहन शब्दावली मा अंतर - प्रसारण को खेल्छ भन्ने संयन्त्र छ। यो शक्ति प्रसारित गर्न प्रयोग गरिन्छ, तर जो उहाँले नाम पायो किनभने यो एक ठूलो सुविधा छ। प्रक्रिया को अंतर परिक्रमा मा शक्ति दुई भागमा विभाजन वा differentially सम्बन्धित धारा वा दुई शक्ति प्रवाह एक मा समेट्न छन् छ भन्ने तथ्यलाई। यो शक्ति को दुई प्रवाहको यो differentially लिङ्क कि, राशि मा अर्थात् तिनीहरूले एक सय प्रतिशत क्षमता दिन टिप्पण लायक छ, तर एकै समयमा तिनीहरूले विशिष्ट आंकडा छैन। अर्को शब्दमा, तिनीहरूले क्षमता प्रतिशत 50 50, र 70 30 प्रतिशत र0100 प्रतिशत र, conversely, क्षमता प्रतिशत0100 रूपमा दिइएको गर्न सकिन्छ।
खैर, यो अंतर नै सम्बन्धी आधारभूत जानकारी छ। तथापि, लेखको विषय तपाईं सान्दर्भिक वस्तुको विचार गर्न अगाडि बढ्न गर्नुपर्छ त, अलि फरक छ। लेखको विषय - एलएसडी-अंतर, यो के हो, आफ्नो विचार यो संयन्त्र कसरी र के हो। यो के थप छलफल गरिनेछ छ।
सीमित पर्ची अंतर एलएसडी आत्म-ताला छ, र यो शास्त्रीय impressively embodiment भिन्न हुन्छ। मतभेद के हुन्? एक्सल मा एक ठूलो फरक चाँडै र कुशलतापूर्वक समस्या समाधान गर्न अनुमति दिन्छ जो परिक्रमणहुनेकिसिमकोगती, दस्ता जब लक सक्रिय छ भन्ने तथ्यलाई। साधारण उदाहरण - यो अगाडि वा पछाडिको पाङ्ग्रा buksovka, यो शास्त्रीय अंतर मा परिवर्तन को लागि आवश्यकता को प्राथमिक कारण थियो त्यो थियो। को धुरों कुनै पनि स्क्रोल सुरु गर्दा कारण कि पाङ्ग्रा एक वा सडकको अर्को खण्ड हटाउन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई गर्न, एक सीमित-पर्ची अंतर एक वास्तविक मुक्ति हुन सक्छ।
स्वाभाविक पनि र चिल्लो सडक सतहहरु र तपाईं लक आवश्यक छैन - तर यो सिद्धान्त थप ध्यान गर्न अर्को कारण हो। भिन्नता पछि विभिन्न वाहन र विभिन्न सडक सतहहरु र अवस्था को लागि उपयुक्त हो कि फरक लक प्रकार संग अवस्थित। त्यो तपाईं किन बढी ध्यान छ र जो खडा घर्षण एलएसडी को एक अंतर छ, अध्ययन गर्नुपर्छ।
तपाईं के एलएसडी सीमित पर्ची अंतर छ, तर को एक सामान्य विचार, छ तिनीहरूले तपाईंलाई सोध्न भने के शीर्षक निर्दिष्ट छन् जो यी तीन अक्षर, - तपाईं जवाफ दिन सक्षम हुने? वास्तवमा, सबै एकदम सरल छ - जो विभिन्न तरिकामा अनुवाद गर्न सकिन्छ सीमित स्लिप अन्तर रूपमा परिचित गरयो लागि खडा छ।
माथि एक विकल्प निर्दिष्ट गरिएको छ - पर्ची अंतर, तर तपाईं अक्सर अर्को पाउन सक्नुहुन्छ - वृद्धि आन्तरिक प्रतिरोध संग अंतर। दुवै विकल्प सही हो, र यदि तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि प्रयोग गर्न, तपाईँले बुझ्न संभावना छ। तर यो धेरै सजिलो, पाठ्यक्रम, को एलएसडी प्रयोग कम, यो, सार्वभौमिक संक्षिप्त र सबै बुझ्ने हो किनभने।
तर, यो सबै बस सैद्धान्तिक डाटा छ - यो तथ्यलाई सामना गर्न समय कसरी एलएसडी-अंतर, र शास्त्रीय एनालग आफ्नो तुलना संग खडा सुरु गर्नुहोस्।
एलएसडी अंतर तुलना एक क्लासिक काम गर्छ
शास्त्रीय अंतर पनि एकदम व्यापक प्रयोग गरिन्छ प्रत्येक जो धेरै नाम, छ। यो एक मानक भनिन्छ गर्न सकिँदैन, खुला र पनि मुक्त - र यसको विशिष्ट सुविधा यो उत्पादन शाफ्ट को कोणीय velocities मा फरक को संभावना अनुमति दिएको छ भन्ने तथ्यलाई छ। यो कस्तो अर्थ राख्छ? यो उत्पादन शाफ्ट प्रत्येक एक सय प्रतिशत, र शून्य प्रतिशत रूपमा संचालित गर्न सकिन्छ भन्ने हो। र यो, पालो मा, शाफ्ट को एक पनि रोक्न सक्छ भन्ने हो। यसलाई सजिलै दल्नु एक पाङ्ग्रा पूर्ण क्षमता मा चलिरहेको बेला को अन्तर्गत देख्न सकिन्छ, र दोस्रो स्क्रोल छैन।
यो समस्या एलएसडी-अंतर सामना कसरी गर्न सक्छ? यो संयन्त्र को सञ्चालनको सिद्धान्त एकदमै सरल छ - यो एक स्वचालित लक सिस्टम दुई शक्ति प्रवाहको फरक अनुमति छ, तर पर्याप्त सानो, उदाहरणको लागि, 40 प्रतिशत 60 प्रतिशत। तथापि, फरक भएको उपयोगी सीमा नाघ्यो गर्दा यस घटना को नकारात्मक प्रभाव देखि वाहन सुरक्षा लक छ। एलएसडी-अंतर सञ्चालन सबैभन्दा, बंद-सडक प्रस्ट साथै खेल कार छ।
यस्तो उपकरण कहाँ प्रयोग गर्ने?
तपाईं थाह छ, वाहन प्रत्येक प्रकार को लागि ताला भिन्नता छ र मार्जिन क्षमता यसको आफ्नै तरिकामा छ। तपाईं एक सपाट र चिल्लो छापिएको सडक वा राजमार्ग मा एक कार ड्राइभिङ हो भने, तपाईंले माथि वर्णन समस्या को हेरचाह गर्न आवश्यक छैन। माथि उल्लेख गरिएझैं सबैभन्दा लागू बन्द-सडक र खेल कार मा यस्तो अंतर छ। तपाईं सम्भवत त्यसपछि एक एसयूवी, drive भने, तपाईं कहाँ यसलाई आफ्नो कार स्किड गर्न सुरु संभावना छ कुनै न कुनै भू-भाग, अधिक यात्रा गर्न छ। र यो जोगिन, तपाईं पहिले नै बुझेका रूपमा, तपाईं एक गुणस्तर अंतर ताला आवश्यक छ।
एलएसडी-संस्करण आदर्श समान रूप शक्ति प्रवाह वितरण र एक रूख सबै शक्ति हुन्छ, र अन्य स्थिर रहन्छ भन्ने अलग्गै, यो लागि उपयुक्त छ। लगभग तपाईं खेलकुद कार ड्राइभिङ गर्दा नै कुरा मामला मा हुन्छ। तर, यो मामला मा, आफ्नो लक्ष्य छैन कुनै न कुनै भू-भाग सामना र सुरु मा डामर हटाउन छ।
तपाईं कम्तिमा एक पटक यात्री कार एक ठाउँबाट उच्च गति मा सुरु हुनेछ रूपमा देखेको छ भने, तपाईं पक्कै पनि पाङ्ग्रा सुरु मा scrolled छन् सूचना - यो सिर्फ कारण शक्ति प्रवाह मा फरक पनि उच्च छ। सीमित-पर्ची अंतर जसबाट न्यूनीकरण र पुस्तक पाङ्ग्रा उच्च गति सुरु गर्न, स्वीकार्य न्यूनतम यो फरक कम गर्छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, एलएसडी-अंतर सुबारु दौड मोडेल शक्ति प्रवाह बीच अधिकतम फरक सीमित गर्ने प्रयास, तर समग्र वाहन प्रदर्शन गर्न पूर्वाग्रह बिना हुनेछ।
तपाईंले पहिले नै कसरी यो अंतर समान काम गर्छ को एक सामान्य विचार प्राप्त गर्न व्यवस्थित छन्, तर लायक यो क्षण मा अलग देख। आखिर, काम को सिद्धान्त - यो यन्त्र सम्पूर्ण समझ मा सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के छ। त्यसैले, सुरुमा यो संयन्त्र, क्लासिकल जस्तै तरिकामा संचालित - शक्ति दुई च्यानल मार्फत आपूर्ति छ, तर यो मामला मा त्यहाँ एक सिरियल सीमा जो आन्दोलन को प्रक्रिया मा हासिल गर्न सकिन्छ यी दुई शक्ति बीच फरक छ।
आपतकालीन र प्रवाह शक्ति को मामला अन्य को क्षमता भन्दा बढी गर्न सुरु गर्दा परिणाम, रूप, उही लक कि काम गर्दछ। परिणाम शक्ति एक redistribution छ, तर बरु छ कि यसको मानक वितरण, 50 50 प्रतिशत गर्न रिसेट गर्नुहोस्। टोक normalization तपाईं एक कठिन अवस्था बाहिर प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। को आधुनिक मोडेल अंतर ताला सक्रिय रूपमा लामो स्थिति फिर्ता सामान्य छ रूपमा, त्यो छ, सडक संग सम्पर्क पूर्णतया पुनःस्थापित गरिने छैन सम्म रहिरहन्छ।
एकदम स्पष्ट भएको छ, यी तंत्र छैन संसारमा मात्र कार छन्। तथापि, तिनीहरू पनि तपाईं पनि थप विवरण विचार गर्नुपर्छ जो प्रकार, विभाजित छन्। त्यसैले, मुख्य प्रजाति त्यहाँ केवल दुई हो, तर तिनीहरू पूर्ण बिभिन्न सिद्धान्तहरू काम। पहिलो, वेग गर्न संवेदनशीलता फरक आधारित छ जो एक संरचना हुँदा दोस्रो - प्रसारण टोक मा फरक गर्न संवेदनशीलता मा। तर, यदि त्यसैले यो गर्न विशेष ध्यान साँच्चै ठूलो फरक छ? यो सिक्न समय।
को एलएसडी-भिन्नता बीच फरक
त्यसैले, विकल्प एक जो गति मा फरक निर्भर लक सक्रिय दुई तंत्र, र अन्य बीच छ भने - टोक मा फरक आधारमा, जो एक तपाईँले चयन गर्नुपर्छ?
यो पहिलो प्रकार धेरै लोकप्रिय, यो चलिरहेका छन् भनेर एलएसडी-अंतर सबैभन्दा कार प्रयोग छ भनेर थाह पाउँदा लायक छ। तसर्थ, यो पक्षमा एक विकल्प बनाउन लायक छ। कारण त्यहाँ धेरै दुई रूपमा छन्। एक एकदम सरल संयन्त्र सजिलो र उत्पादन गर्न सस्तो छ कि - पहिलो को अंतर को viscous युग्मन आधारित डिजाइन धन्यवाद संचालित छ। त्यसैले, एक अंतर यस्तो मूल्य दोस्रो प्रकार को यांत्रिक लक थप उत्पादन गर्न महंगा र खरीद गर्दा यसैले अधिक महंगा हुँदा, कम हुनेछ।
दोस्रो कारण सादगी र unpretentiousness viskomufty मा निहित - तपाईं उनको हेरविचार छैन, र यदि यो कुरा, त्यसपछि मर्मत सरल र सस्तो हुनेछ। हामी अंतर को दोस्रो प्रकार विचार भने, डिजाइन त्यहाँ एक एकदम जटिल, मरम्मत एलएसडी-अंतर कठिन र महँगो हुनेछ भनेर, भागहरु को एक ठूलो संख्या छ छ।
गति फरक संवेदनशील छन् भनेर भिन्नता
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो मुद्दा टाढा यसलाई सुरुमा जस्तो सक्छ रूपमा सरल रहेको हो - अहिले पनि त्यहाँ बितरण छन् हुन्, अझ राम्ररी यी दुई प्रजाति जाँच्न समय छ।
त्यसैले, गति फरक गर्न संवेदनशीलता आधारमा तंत्र को पहिलो संस्करण - एक viscous अंतर छ। तपाईं धेरै ध्यान दिएर एलएसडी-अंतर यस प्रकारको लागि तेल चयन गर्न आवश्यक छ किनभने यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका सिलिकन जेल, तेल संग छैन मिश्रित गर्नुपर्ने द्वारा प्ले। यो पनि viscous युग्मन, कि उपकरणको मुख्य जलाशय छाप छ।
वास्तवमा, अंतर यस प्रकारको को प्रमुख लाभ को एक ठीक किनभने जेल र प्राप्त - तिनीहरूले कारण जेल को गुण परिवर्तनको धेरै सजिलै काम। उहाँलाई धन्यवाद, धेरै प्रसारण मा समस्या छ जो aliasing, गायब। र मोटर वाहन उद्योग अहिले मुख्य रूप ड्राइभर र यात्रु को आराम सुधार उद्देश्य छ भन्ने तथ्यलाई दिइएको, यो सम्पत्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
तर अंतर यस प्रकारको सिद्ध छ कि लाग्छ छैन - यो यसको कमियां छ। उदाहरणका लागि, काम herein तरल पदार्थ दबाव, जसद्वारा ऊर्जा भाग हराएको छ, र यसैले इन्धन खपत बढ्ने द्वारा पूरा भएको छ। पनि प्रत्येक बलियो रस्सा यसको प्रभावकारिता कम हुनेछ भनेर यस्तो संयन्त्र, उच्च भार धेरै संवेदनशील छ भन्ने भूल छैन। र, को पाठ्यक्रम, पहिले नै माथि छलफल भएको थियो जो एलएसडी-अंतर तेल, लागि, उच्च गुणवत्ता को, को viscous युग्मन compaction एक वृद्धि संवेदनशीलता छ देखि हुनुपर्छ।
तर, अंतर संवेदनशील गति फरक अर्को प्रकारको छ - तिनीहरूले gertornogo पंप को आधारमा सञ्चालन। यो अपेक्षाकृत हाल एक प्रविधि - थप विशेष, त्यो विकास gertornym पंप चालक आधुनिक कार मा स्वतन्त्र सञ्चालन गर्न सक्छन्, कम्प्युटर अग्रिम साथ सँगै प्राप्त गर्न थाले। त्यो निकट भविष्यमा आशा छ ठ्याक्कै यस प्रकारको सबैभन्दा लोकप्रिय हुनेछ - त्यो उदाहरणका लागि, सेट सबै वाहन टोयोटा मा। तर तपाईं अब ध्यान दिएर एलएसडी लागि तेल चयन गर्न आवश्यक छ कि भूल छैन। अन्तर टोयोटा र यो प्रविधि यसलाई संवेदनशील छ प्रयोग अन्य ब्रान्डहरु।
टोक को प्रसारण मा फरक संवेदनशील छन् भनेर भिन्नता
राम्रो र दोस्रो प्रकार, तपाईं थाह छ, छैन गति फरक र टोक को प्रसारण गर्न संवेदनशील छ। स्वाभाविक, यो संयन्त्र को डिजाइन धेरै फरक छ - यांत्रिक भिन्नता कृमि प्रकार पूरा अक्सर बजार मा। आफ्नो काम सुनिश्चित गर्न छ कि आवास र ड्राइव शाफ्ट मा torques को फरक को अनुज्ञेय आदर्श नाघ्यो घटनाको स्वचालित ताला। फलस्वरूप, फरक अस्वीकार्य प्रदर्शन गर्न वृद्धि गरिएको छ भने, त्यसपछि त्यहाँ टोक को एक स्वचालित redistribution छ।
यसलाई लक छ कि, पूर्ण छैन भन्ने तथ्यलाई ध्यान लायक छ, यो शरीर र ड्राइव शाफ्ट को टोक बीच फरक छ ठ्याक्कै निर्भर गर्दछ। अक्सर यो पछिल्लो अंतर एलएसडी छ - जो यो अगाडि र कार को रियर धुरा मा स्थापित छैन भन्ने हो।
तपाईंले यो संयन्त्र सबैभन्दा लोकप्रिय उप-प्रजाति दुई पाउन सक्नुहुन्छ - र Thorsen kvayf। मूल सीधा दुई अंग्रेजी शब्द, "टोक" र "संवेदनशील" को रूपमा अनुवाद जो क्रमशः टोक र संवेदन देखि गठन।
खैर, अब तपाईं एलएसडी अंतर रूपमा यस्तो संयन्त्र बारे जान्नु आवश्यक लगभग सबै थाहा छ। क्षणमा तिनीहरूले सबैभन्दा प्रभावकारी छन् किनभने टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज र कार आज लगभग सधैं यस्तो उपकरणहरू साथ सुसज्जित सबै अग्रणी ब्रान्ड हो।
इन्जिन ठंडा सिस्टम: यन्त्र, सञ्चालन सिद्धान्त, दोष
डिस्क "LENSO" - आफ्नो कार प्राप्त गर्न सक्छ कि सबै भन्दा राम्रो कुरा!
"शेवरलेट Aveo" (पालकी): मोडेल को एक समीक्षा
तंग घुमिरहेको चक्का, शक्ति: सम्भव हुन्छ। मर्मत GUR
फोर्ड ट्रान्जिट अनुकूलन: वर्णन, विनिर्देशों र समीक्षा
कार रेडिएटर को लागि सीलेंट। Sealants समीक्षा नमस्ते-गियर, ABRO, Liqui Moly, "Manol"
हामी vashkofemem साथ सँगै कफी बिहान सुरु
"मेघाफोन" इन्टरनेटको थप रकम कसरी सक्रिय?
तोरी कपाल: कसरी राम्ररी प्रयोग गर्ने?
मालिश - थकान बाट मुक्ति
यो प्राचीन र नयाँ-चाल बैजनी गाजर
पानी प्रयोग प्रविधी स्लिमिङ इच्छा मिलाउँछ!
स्थानीय काम - यो जस्तै छ?
आफ्नो बच्चाको लागि एक कुकुर पोशाक कसरी बनाउने?
विन्डोज 10: कम्प्यूटर समस्या